ကင်းမျှော်စင် | ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈
ဖတ်လို ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) မြန်မာ ရိုမေးနီးယား လတ်ဗီးယား ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်္ဂလိပ် အယ်လ်ဘေးနီးယား
ယင်းမေးခွန်း၏အဖြေသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။ လူတစ်ဦး၏မနက်ဖြန်အလားအလာသည် ယနေ့ ထိုသူ၏ပြုမူပုံအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဥပမာ၊ အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်မရှိသူတို့သည် “စားကြကုန်အံ့၊ သောက်ကြကုန်အံ့၊ နက်ဖြန်သေရကြမည်” ဟူသောသဘောထား မွေးမြူကြပေမည်။ (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၃၂) ထိုသို့သောစိတ်သဘောထားများက လွန်ကြူးစွာစားသောက်ခြင်းနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေတတ်ပြီး စစ်မှန်သောစိတ်ငြိမ်သက်မှု မဖြစ်စေပါ။
အမှန်တွင် အနာဂတ်သည် လူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအပေါ် လုံးလုံးမူတည်နေသည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာမှာ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာ့လေထုနှင့် ရေမြေတို့သည် မကြုံစဖူးအတိုင်းအတာဖြင့် ညစ်ညမ်းလျက်ရှိ၏။ နျူကလီးယားစစ်၏ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်သမားများ၏တိုက်ခိုက်မှုတို့သည် တိုးများလျက်ရှိ၏။ ရောဂါနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတို့က ကမ္ဘာတစ်ဝန်း သန်းထောင်နှင့်ချီသောသူတို့ကို ထိခိုက်လျက်ရှိသည်။ သို့တိုင် မျှော်လင့်ချက်ထားရန် အကြောင်းကောင်းများရှိသည်။
လူတို့သည် အနာဂတ်ကို တိကျမှန်ကန်စွာကြိုမဟောနိုင်သော်လည်း ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် မိမိကိုယ်ကို ‘အဦးမှစ၍ အဆုံးတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ ရှေးကာလမှစ၍ မဖြစ်သေးသော အမှုအရာတို့ကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြသောအရှင်’ အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ (ဟေရှာယ ၄၆:၁၀) အနာဂတ်မည်သို့ဖြစ်မည်နှင့်ပတ်သက်၍ ယေဟောဝါအဘယ်အရာမိန့်တော်မူသနည်း။
ယေဟောဝါသည် ကမ္ဘာမြေ သို့မဟုတ် ၎င်းပေါ်ရှိသက်ရှိတို့ကို ပြုပြင်၍မရသည်အထိ ပျက်စီးသွားရန် ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပေ။ အမှန်တွင် ဘုရားသခင်သည် “မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးသောသူတို့ကို ဖျက်ဆီးတော်မူ” မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျမ်းစာကတိပြုထားသည်။ (ဗျာ. ၁၁:၁၈) ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် ကောင်းကင်အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့် ယေဟောဝါသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိဆိုးသွမ်းမှုများကို ရှင်းလင်းပြီး မူလက ကိုယ်တော်ရည်ရွယ်ခဲ့သည့်အခြေအနေများအတိုင်း ဖြစ်လာစေမည်။ (ကမ္ဘာဦး ၁:၂၆-၃၁; ၂:၈၊ ၉; မဿဲ ၆:၉၊ ၁၀) မကြာမီ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းကို အကျိုးသက်ရောက်စေမည့် အဖြစ်အပျက်များကို ဖော်ပြထားသော အောက်ပါကျမ်းချက်များက အနာဂတ်ကို သိမြင်စေသည်။
ဆာလံ ၄၆:၈၊ ၉။ ‘ယေဟောဝါစီရင်ပြုပြင်၍ မြေကြီးပေါ်မှာ သုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းအမှုတော်များကို လာ၍ကြည့်ရှုကြလော့။ လေးကိုချိုးလျက်၊ လှံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်လျက်၊ ရထားကိုမီးရှို့လျက် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် စစ်မှုကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏။’
ဟေရှာယ ၃၅:၅၊ ၆။ “ထိုအခါ မျက်စိကန်းသောသူတို့သည် မျက်စိပွင့်လင်းကြလိမ့်မည်။ နားပင်းသောသူတို့သည် နားပင်းခြင်းနှင့်လွတ်ကြလိမ့်မည်။ ခြေဆွံ့သောသူတို့သည် ဒရယ်ကဲ့သို့ခုန်ကြလိမ့်မည်။ စကားအသောသူတို့သည် သီချင်းဆိုကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား တော၌စမ်းရေထွက်၍ လွင်ပြင်၌မြစ်ရေစီးလိမ့်မည်။”
ဟေရှာယ ၆၅:၂၁၊ ၂၂။ “ထိုသူတို့သည် ကိုယ်ဆောက်သောအိမ်၌နေကြလိမ့်မည်။ ကိုယ်စိုက်သောစပျစ်ဥယျာဉ်အသီးကို စားကြ လိမ့်မည်။ သူတို့သည် အိမ်ကိုဆောက်၍ အခြားသောသူနေရမည်မဟုတ်။ သူတို့သည် စပျစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်၍ အခြားသောသူစားရမည်မဟုတ်။”
ဒံယေလ ၂:၄၄-၄၅။ “ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်နိုင်သော နိုင်ငံတစ်ခုကို ထိုမင်းကြီးများလက်ထက်၌ ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်သည် တည်ထောင်စေတော်မူမည်။ ထိုနိုင်ငံသည် အခြားသောလူမျိုးလက်သို့မရောက်ရဘဲ အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကို ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီး၍ အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်။”
ယောဟန် ၅:၂၈၊ ၂၉။ “သင်္ချိုင်းများမှာရှိသောသူအပေါင်းတို့သည် သားတော် [ယေရှု] ၏စကားသံကိုကြား၍ ထွက်ရမည့်အချိန်ကာလရောက်လတ္တံ့။”
ဗျာ. ၂၁:၃၊ ၄။ “ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်တိုင်သူတို့နှင့်အတူရှိနေ၍ သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူမည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကို သုတ်တော်မူမည်။ နောက်တစ်ဖန် သေဘေးမရှိရ။ စိတ်မသာညည်းတွားခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်းလည်းမရှိရ။ အကြောင်းမူကား ရှေးဖြစ်ဖူးသောအရာတို့သည် ရွေ့သွားကြပြီ။”
သမ္မာကျမ်းစာအဖြေက စစ်မှန်သောစိတ်ငြိမ်သက်မှု ဖြစ်စေပုံ
အစပိုင်းတွင်တော့ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြေအနေများသည် မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် ကောင်းလွန်းနေပုံရ၏။ သို့သော် ယင်းကတိတော်များသည် လူတို့ပေးသောကတိမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ပေးသောကတိတော်များဖြစ်သည်။ ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် “မုသာမသုံးနိုင်။”—⁠တိတု ၁:⁠၂၊ ကဘ။
ဘုရားသခင့်ကတိတော်များကို ယုံကြည်စိတ်ချရန် သင်ယူပြီး ကိုယ်တော့်ပညတ်များနှင့်အညီ အသက်ရှင်နေထိုင်သည်ဆိုလျှင် အခက်အခဲဆုံးအခြေအနေများရှိလင့်ကစား စိတ်ငြိမ်သက်မှု ဆက်ရှိနေပါလိမ့်မည်။ စစ်မှု၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ဖျားနာမှုနှင့် အိုမင်းခြင်းအခက်အခဲများ သို့မဟုတ် သေရမည့်အလားအလာပင်ရှိပါစေ ထိုအရာများက သင့်ငြိမ်သက်မှုကို ထာဝစဉ်ပျောက်ဆုံးစေမည်မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်က ယင်းနာကျင်မှုဝေဒနာရှိရှိသမျှ၏ အကျိုးဆက်များကို ပပျောက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း သင်ယုံကြည်စိတ်ချမည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
အနာဂတ်အတွက် ထိုသို့သောမျှော်လင့်ချက်မျိုးကို သင်မည်သို့ရရှိနိုင်သနည်း။ သင်၏ “စိတ်သဘောကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ” ရမည်ဖြစ်ပြီး “ဘုရားသခင့် အလိုတော်အတိုင်း ကောင်းမြတ်တော်မူသောအရာ၊ လက်ခံတော်မူဖွယ်သောအရာ၊ စုံလင်တော်မူသောအရာတို့ကို” သင်ကိုယ်တိုင် သိရှိအောင်ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ (ရောမ ၁၂:၂၊ ကဘ) သမ္မာကျမ်းစာကတိတော်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ကြောင်း ထပ်ဆင့်သိရန် လိုပေမည်။ ထိုသို့သောဆန်းစစ်ခြင်းသည် ကြိုးစားရကျိုးနပ်၏။ ဘဝတွင် သင်လုပ်ဆောင်သည့် အနည်းငယ်သောအရာများက သင့်အား ထူးကဲသောစိတ်ငြိမ်သက်မှုခံစားစေလိမ့်မည်။
[စာမျက်နှာ ၈ ပါပုံစာ]
အနာဂတ်အကြောင်း ဘုရားသခင့် နှုတ်မြွက်စကားတော် မည်သို့ဆိုထားသနည်း
[စာမျက်နှာ ၉ ပါပုံစာ]
ယောဟန် ၅:၂၈၊ ၂၉
ယေရှုနာမကို အမှီပြု၍ အဘယ်ကြောင့် ဆုတောင်းကြသနည်း
မိသားစုပျော်ရွှင်မှုအတွက် သော့ချက်များ ကတောက်ကဆများကို ဖြေရှင်းခြင်း
ယေဟောဝါအား ချီးမွမ်းသည့် နေရာ
ကလေးတွေကို သင်ပေးပါ မာကု လက်မလျော့ခဲ့
ဆင်းရဲခက်ခဲမှုကို ဘုရားသခင် အဘယ်ကြောင့် ခွင့်ပြုထားသနည်း
မိခင် တစ်ဦးအနေနှင့် တာဝန်ကျေပွန်စေရန် ကြိုးစားခြင်း
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈
ကင်းမျှော်စင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၀၈